Kinky curly ဆံပင်: သဘာဝဆံပင် Extensions & အကောင်းဆုံး Clip-ins 2019
ကျစ် / ဇာထိုးပန်းထိုးဆံ
extension Tools များ & Carrier
အပြောင်းအလဲနဲ့ & သင်္ဘော
စောင့်ရှောက်မှု & Maintenance
သီးသန့်အကြှနျုပျ၏သဘာဝဆံပင် Extensions @ အကောင်းဆုံး Kinky curly ဆံပင်
👸🏿 ကွိုဆို သို့ အကြှနျုပျ၏သဘာဝဆံပင် Extensions, ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အရောင်များ၏အမြိုးသမီးမြားအဘို့အ curly ဆံပင် kinky အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအလှတရားပူးတွဲတင်ပြထားများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့ရန်နှင့်အရောင်များ၏အမြိုးသမီးမြားအတှကျအရေးပါအထုပ်၏စုဆောင်းခြင်း, ကလစ်-ins, wigs နှင့်ပိတ်ပစ်ကိုဆက်ကပ်။ 😄
အာဖရိက Kinky curly
ကျနော်တို့အရှည် 10 အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုပူဇော် "- 28" ။ အဲဒီအစားသငျသညျအတိုများနှင့် chic သို့မဟုတ်ရှည်လျားပြင်းထန်သောချင်တယ်! အတော်များများဖောက်သည်ကသူတို့ကိုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပမာဏကိုပေးသကဲ့သို့သူတို့သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ရေးကိုချစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါပြီ။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး extension များရွေးချယ်ရာတွင်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ divas ကလစ်-ins အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး, ဖောက်, wigs, နှင့်သဘာဝဆံပင်အဘို့အ extensions တွေကိုအမျိုးမျိုးပူဇော်ဘာဖြစ်လို့ရဲ့နားလည်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးကိုသင်ကိုယ်စားပြုယ်ယူရန် Kinky curly ဆံပင် ...
သဘာဝဆံပင် Weave Blend ရန်လွယ်ကူသော
ကျနော်တို့တက်ကြွနှင့်ဇိမ်ခံ kinky curly ဆံပင်အတွက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ tresses နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ရက်ရောနှောနေခြင်းသောအခါ, သင်၏အကြော့ရှင်းနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကွောငျးထငျရှားပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့၏ kinky curly ရက် ကမ်ဘာပျေါတှငျလူသုံးအများဆုံးဖောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်ခြောက်လတိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးမင်းသမီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တင်ပို့နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ tresses သူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အနှစ်သာရဖမ်းယူချင်သောငါတို့အတှေ့အကွုံဖူးရဲ့။
အရောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်သည်ထိပ်တန်း Kinky ဆံပင် Extensions
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအွန်လိုင်းအလွန်အကောင်းဆုံး kinky ဆံပင် extensions တွေကိုမရသေချာစေရန်စေ့စေ့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဘို့အနာရီရေကြောင်းနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအမိန့်ပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ဖို့သေချာပါစေ kinky ဆံပင်အာဖရိက, ဤ texture ပျော်မွေ့သောသူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးသင့်တော်ပါတယ် ကလစ်-ins or wigs အထူးသဖြင့် အမျိုးအစား4ကျစ်ဆံပငျ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ tresses သူမ၏ဦးရစ်သရဖူနှင့်ဘုန်းအသရေများမှာ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နေစဉ်အားလုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖုံးလွှမ်းကြောင်းသေချာစေရန်ချင်တယ်။
အပူဆုံးသဘာဝဆံပင် Clip Ins အွန်လိုင်း
ကျနော်တို့ melanin မိဖုရားအဘို့အ texture မှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘာဝကဆံပင် extension များအတွက်အဖိုးတန်နှင့်တက်ကြွကလစ်အာရုံစိုက်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရောင် 1b စောင့်ရှောက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလစ်-ins ၏အရောင်ပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အထုပ်, ပိတ်ပစ်သို့မဟုတ် wigs နှင့်အတူမျိုးစုံအကာအကွယ်စတိုင်များရယူနိုငျပါသညျ။ သင်တို့သည်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအသွင်ပြောင်းဘို့ extension များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလစ်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူသောကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန် အာဖရိက kinky curly ကလစ်-ins သင်တို့ကိုတစ်ဦးအလှပြင်ဆိုင်မရှိဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအရှည်နဲ့ volume အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြု instantaneously.-
install ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ: အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆံပင်သည် extension များအတွက်အကောင်းဆုံးကလစ်
Long ကသဘာဝဆံပင်အပိုင်း2တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
မတ်လ 2, 2019
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2019
Curlformers နှင့် Waveformers သလားစေရန်မည်သို့
ဇန်နဝါရီလ 28, 2019
အဆိုပါ VIP club Join!
ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းအထူးပရိုမိုးရှင်းလုပ်ဖို့သီးသန့် Access ကိုသည် join
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပို့စာရငျးကို Join ပြီးအခမဲ့ရေကြောင်းကူပွန်ကိုလက်ခံရရှိ! ကျွန်တော်တို့သည်ရောင်းအားပေါ်တွင်သင်ကို update ပေး-a-နည်းလမ်းတွေ, ပြိုင်ပွဲ & အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေပါလိမ့်မယ်။
ကွိုဆို Diva: ချိတ်တွဲများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Email လိပ်စာမှ Send